Warbixin: + Sawirro: Qaabkii ay u dhacday dacwadii badda iyo Kenya oo qodob xasaasi ah ku qabsatay Somalia - Caasimada Online
Home Badda Warbixin: + Sawirro: Qaabkii ay u dhacday dacwadii badda iyo Kenya oo...
Warbixin: + Sawirro: Qaabkii ay u dhacday dacwadii badda iyo Kenya oo qodob xasaasi ah ku qabsatay Somalia
Hague (Caasimada Online) – Kenya ayaa maxkamadda Caddaaladda Dunida ka hor sheegtay in maxkamdaasi oo fadhigeedu yahay magaalada Hague aysan daw u lahayn qaadista dacawadda la xiririta soohdinta badda ee kala dhaxeyso Soomaaliya.
Xeer-ilaaliyaha Guud ee Soomaaliya, Dr. Axmed Cali Daahir, ayaa BBC-da u sheegay in Soomaaliya ay ka go’antahay in doodda muranka soohdinta lagu soo afjaro maxkamadda caalamiga ah ee Caddaaladda.
Maxkamadda ayaa marka ay dhageysato doodan labada dhinac waxay go’aan ka soo saari doontaa dalabka Kenya ee ah in maxkmaddu aysan qaadi karin doodan iyo in kale.
Dr. Axmed ayaa sheegay in garsoorayaasha maxkamadda ay go’aan ku gaari doonaan muddo seddax bilood gudahood ah.
Go’aannada ay gaarto maxkamaddan racfaan lagama qaadan karo, waxayna dhinacyada ku khasbanyihiin inay fuliyaan.
Wasaaradda Arrimaha Debadda ee Kenya waxay hadda ka hor ka digtay in haddii ay Soomaaliya ku guuleysato dacwadda ay suurta gal tahay in Kenya ay ku dhacdo bad la’aan.
Yuusuf Garaad oo kasoo warramay xarunta maxkamadda hoos ka aqri
Maanta ayuu Hague ka furmay dhegeysiga diidmo ay Kenya ka keentay dacwadda ay Soomaaliya u gudbisay Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ICJ.
Kenya waxaa ay qabtaa in aan Maxkaddu gelin dacwadda iyada oo ku adkeysaneysa in Soomaaliya iyo Kenya ay Is-Afgarad kala saxiixdeen 2009. Kaas oo labada dal ay ku heshiyyeen, sida ay Kenya u dhigeyso in wadahadal ay xalliyaan dhammaan aagagga ay labada dhinac ku muransan yihiin.
Sidaa darteed Kenya waxay qabtaa in Soomaaliya ay xushmeyso oo ay u hoggaansanaato waxa uu qorayo Is-Afgarad ay la saxiixatay Kenya 2009.
Kenya waxaa ay Soomaaliya ku eedeysay in ay qaadatay Istaraateejiyad ay ku diideyso Is-Afgaradka uu Wasiirkeedu saxiixay. Waxayna sheegtay in diidmada marba weji loo yeelay. Mar la yiri Wasiirku ma haysan oggolaasho, taas oo beenowday markii ay soo baxday warqaddii loogu fasaxy in uu saxiixo. Mar la yiri Baarlamaanka ayaa diiday laakiin Kenya waxay sheegtay in ay hayso kelmad kasta oo ah dooddii Baarlamaanka ka dhacday kuna jirin wax sheegaya Is-Afgaradku in uu khaladan yahay.
Kenya waxay dooddeeda u sameysay hordhac qurux badan oo muujinaya sida ay Kenya o saacidday Dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed. Tusaale waxay Kenya u soo qaadatay soo dhoweynta qaxootiga, marti-gelinta shirkii lagu dhisay Dowladda Soomaaliya 2004, marti gelinta Xukuumadda iyo Baarlamaanka Soomaaliya ilaa ay aakhirkii u suurta gashay in ay si qeyb qeyb ah ugu guuraan Soomaaliya. Kenya waxaa kale oo ay sheegtay in ay wiilasheeda iyo gabdhaheeda ciidanka ay u dirtay Soomaaliya si ay uga qeyb qaataan nabadeynta dalka, howlgalkaas oo ay ciidan badani uga dhinteen.
Arrimahaas oo dhan ayaa muujinaya ayay yiraahdeen in aanay suurta-gal ka ahayn Kenya in ay bad Soomaliya leedahay ay boobto.
Kenya waxaa wafdigeeda hoggaaminaya Garyaqaanka Guud, Githu Muigai.Madam Rose Makena Muchiri, oo ah Danjiraha Kenya u fadhiya magaalada Hague, Amos Wako oo xubin ka ah Aqalka Sare ee Kenya horna u ahaan jiray Garyaqaanka Guud, mas’uuliyiin kale iyo Qareenno caalami ah oou dhashay Mareykan, British iyo Faransiis.
Berrito ayay Maxkamaddu dhegeysan doontaa jawaabta Soomaaliya.